Dowladda itoobiya oo ciidamadeeda dhawaan kala baxeyso soomaaliya#aqriso sababata | Xaqiiqonews
Dowladda itoobiya oo ciidamadeeda dhawaan kala baxeyso soomaaliya#aqriso sababata
Dowlada Ethiopia ayaa lagu wadaa in Ciidamada uga harsan Somalia ay dhawaan kala baxdo goobaha ay kaga sugan yihiin Gobolada dalka, sida xog cusub ay sheegeyso.
Qorshaha lagu saaraayo Ciidamada Ethiopia ee wali ku harsan Gobolada dalka ayaa waxaa lagu dajiyay kulan 4 March, 2017 ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kaa oo ay ka qeybgaleen Khubaro ku xeel-dheer dhanka amaanka oo kasoo jeeda dalkaasi.
Kulankaani ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn, Wasiirka Gaashaandhiga Ethiopia, Taliyaha Ciidamada Militeriga, La-taliyaha gaarka ah ee Ra’isul wasaaraha iyo qaar kamid ah Saraakiisha hogaamisa Ciidamada Ethiopia kaga sugan Deegaanaka Koonfur Galbeed.
Mas’uuliyiintaani ayaa la sheegay inay isku raaceen in Ciidamada Ethiopia ee ku harsan Gobolada Somalia si dhaqsi ah looga soo saaro Somalia.
Mas’uuliyiinta qaar ayaa soo jeediyay in Guddi laga dhex xulo Wasaarada Gaashaandhiga kuwaa oo ka shaqeynaaya Hanaanka lagu soo saari lahaa Ciidamada maadaama Al-shabaab ay dhigi karaan jid gooyooyin lama dhaafaan ah.
Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn, ayaa Wasiirka Gaashaandhiga Ethiopia ku amray inuu diyaariyo Guddiga ka shaqeyn lahaa isku geynta Ciidamada ku kala sugan Gobolada isku dhow dhow, si halkaasi looga soo daabulo.
Dhinaca kale, Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn, ayaa Wasiirka iyo Saraakiisha howlahaasi loo xilsaaray ku amray in marka hore ay sahmiyaan dhulalka baaxada weyn oo ay isticmaali doonaan Ciidamada mudada lagu guda jiro isku geyntooda.